တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . 15.7.2021 မှ 21.7.2021 အထိ - AtoZ Daily
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . 15.7.2021 မှ 21.7.2021 အထိ
ပူပင်မှုအနည်းငယ် ရှိနေ တတ်သော်လည်း အချစ်ရေး ကောင်းမွန်နေတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်မရှိလျှင် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး သင့်ပေမဲ့ ကြားလူတွေကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိနေတတ် ပါသည်။ ကျန်းမာ ရေး ကတော့ အဖျားအနာရောဂါ၊ ခေါင်းအုံ၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အရေပြား ပေါ်၌ ယားနာများ၊ အရေပြားရောဂါ၊ မျက်ရိုးကိုက်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ ၊ မျက်စိမှုံခြင်းများ စသည်တို့ကို သတိထားသင့်ပါသည်။
အကျိုးပေးဂဏန်း -၈၊၅၊၄ အထူးဟော -ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ ယတြာ -ရဟန်းသံဃာတွေကိုအားဆေးလှူလိုက်ပါ။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂၊၅၊၄ အထူးဟော ကံညံနေသည်။ ယတြာ ကိတ်မုန့်ဝယ်ပြီးခွေးစာကျွေးလိုက်ပါ။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၇၊၆၊၃ အထူးဟော အလုပ်ရှုပ်မည်။ ယတြာ ရွက်လှလေးညွှန့် ဘုရားလှူ ပါ။
သို့သော် မိမိနှင့် အဆင့်တူ၊ အတန်းတူ ရှိသော သူများ၏ အထင်လွဲခြင်း၊ အမြင်မကြည်ခြင်းနှင့် မကောင်း ပြောခြင်းများကို ကြုံတွေ့ရတတ် ပါသည်။ ယှဉ်ပြိုင်တိုက် ခိုက် မှုများကြားမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အခက်အခဲ အနည်းငယ် ရှိနေတတ်ပါ သည်။ အရှိန် အဟုန်မပျက် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရန် သည်းခံပြီးဆက်သွားနိုင်ဖို့လိုပါ တယ်။ ချစ်ရေးဆိုသူတို့ ရှိနေတတ် ပါသည်။
အချစ်ရေး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အချစ်ရေးကောင်းနေတတ်ပါသည်။ လူသိ ရှင်ကြား မဟုတ်သော်လည်း မမျှော်လင့်ဘဲ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါသည်။ ဇွဲ၊ ဝီရိယ အားစိုက်မှု ကောင်းနေခြင်း ကြောင့်လည်း ပညာရေးတွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိတတ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ သို့သော် အနည်းငယ်တော့ သတိထားရတတ်ပါသည်။ ရာသီ အပြောင်းအလဲတွင် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးတုန်၊ ရင်ခုန်၊ မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းများကြုံရနိုင်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၇၊၄၊၈ အထူးဟော ဆွတ်ပျံကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အချိန်ပါ။ ယတြာ ရဟန်းသံဃာတွေကို ထန်းလျက်များများလှူပါ။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂၊၁၊၅ အထူးဟော စုတ်(သို့) လာဘ်ဝင်မည်။ ယတြာ မြေပဲကြော် ဘုရားကပ်ပါ။
ခရီးဝေးသွားခြင်း ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ ကာလပါ။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထွေထွေထူးထူးရောဂါများ မဖြစ်ပေါ်တတ်သော်လည်း အနည်းငယ် တော့ သတိထားရတတ်ပါသည်။ သည်းခြေမှစ၍ဖြစ်သောရောဂါ၊ အပူကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ ဖြစ်ရ တတ် ပါ တယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်မယ်။ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးမဲ့သူတွေ ဝန်းရံနေတတ်တဲ့အတွက်သတိထားပါ။
အချစ်ရေးကောင်း နေတတ်ပါသည်။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် အပေါင်းအသင်းများထဲမှ ချစ်သူ တွေ့ရတတ် ပါသည်။ သို့သော် ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးကွဲဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး မကောင်း သေး ပါ။ အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်နေတတ်ပါ သည်။ ပညာရေးအတွက် အကူအညီ အထောက်အပံ့များ ရရှိ တတ်ပါသည်။ ပညာရေးအတွက် ဇွဲ၊ ဝီရိယ စွမ်းအား စိုက်ထုတ်မှုများသာ မိမိကအားစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
ကပ်ရောဂါအတွင်း နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့သော် . . ဇင်ယော်နီပေးတဲ့ဂမ္ဘီရ နည်းလမ်း
ယနေ့ နေထီးဆောင်းတာ မြင်လိုက်ကြလား မင်းကောင်းမင်းမြတ် ပေါ်တော့မည်